I-China Ephakeme Kakhulu Yokumelana Nokugqwala 6061 T6 Aluminium Tread Plate Umkhiqizi kanye Nomphakeli | URuiyi
Idizayinelwe ukusetshenziswa ku-aerospace, ukufakwa, ama-valve, imiphini yokushayela, ukuhlangana, ukwakheka, izimpawu, kanye nokusetshenziswa kolwandle Ipuleti lokunyathela i-aluminium engu-6061 T6 inokumelana okuphezulu kokugqwala kwawo wonke ama-aluminum aphathwe ukushisa. Kuyinto ingxubevange eyenziwe nge-silicon ne-magnesium. Inamandla aphansi kunamanye ama-aluminum angaqhathaniswa, kepha isasetshenziswa kabanzi.
Idizayinelwe ukusetshenziswa ku-aerospace, ukufakwa, ama-valve, imiphini yokushayela, ukuhlangana, ukwakheka, izimpawu nezicelo zasolwandle
I- Ipuleti lokunyathela i-aluminium engu-6061 T6 inokumelana okuphezulu kokugqwala kwawo wonke ama-aluminum aphathwe ukushisa. Kuyinto ingxubevange eyenziwe nge-silicon ne-magnesium. Inamandla aphansi kunamanye ama-aluminum angaqhathaniswa, kepha isasetshenziswa kabanzi. Lokhu ngokwengxenye kungenxa yokumelana kwayo nokugqwala futhi ngokwengxenye ngenxa yezakhiwo zayo ezinhle kakhulu zomshini. Kunezindlela ezahlukahlukene ongakha ngazo ama-aluminum angama-6061, njengokusebenzisa imishini nokushisela. Isilinganiso semishini yale alloy singamaphesenti angama-90. Ibuye ibe namandla amakhulu wokujoyina. Uma kudingeka, lo mkhiqizo ungafakwa i-anodized noma kusetshenziswe okunye ukumbozwa.
Izinsimbi ezingama-6061 aluminium alloys zivame ukusetshenziselwa ukufaka amapuleti ayisisekelo, izingxenye zamaloli, izinto zasolwandle, izinto zasolwandle, izinto zasolwandle, izixhumi zikagesi, izinto ezisebenza ngogesi nezinsimbi zekhamera. Lokhu kungumbalwa wezicelo eziningi le alloy esetshenziselwa zona. Futhi inamandla okusetshenziselwa izakhiwo zomsebenzi osindayo ezidinga ukumelana nokugqwala kanye nenani elihle lesisindo namandla.
Ukwelapha okushisayo nokusebenza okubandayo kungasetshenziselwa ama-alloys angama-6061. Lapho usesimweni esidonswayo, ukusebenza okubandayo kungenziwa kalula, kwakha umkhiqizo wokuphela osikiwe, ogxiviziwe, obunjiwe, odwetshiwe ngokujulile, ogobile noma othephiwe. Lokhu konke kungafinyelelwa kusetshenziswa izindlela ezijwayelekile zokubanda ezibandayo.
Lapho ukushisa kulapha le ngxubevange, ukufudumeza ngokuphelele kufanele kwenziwe ku-990 degrees F, bese kucishwa amanzi. Ukuze imvula iqine, insimbi kufanele ibekwe kuma-degree angama-320 F amahora ayi-18, kupholiswe umoya, bese kubekwa ku-350 degree F amahora ayisishiyagalombili, bese kupholiswa nomoya futhi.
Ipuleti lokunyathela i-aluminium engu-6061 T6 litholakala ngosayizi ophakathi kuka .125 no .375 intshi ubukhulu, amasentimitha angama-48 ububanzi futhi lifinyelela kumasentimitha ayi-192 ubude.
Amabha ayi-5, iDayimane, AMABHARI amathathu, AMABHOLA AMA-1
Ukuqedwa kwesigayo sokulwa nokushelela 6061 usayizi 6 x 1220 x 2440mm Aluminium Checkered Plate sheet coil for trailer car body
Izici zepuleti le-aluminium engu-6061
3) Ngaphansi costs
5) Ukubukeka okuhle
Ukusetshenziswa kwamakhoyili eshidi lamapuleti angama-6061 aluminium
1) Ukwakhiwa kwesakhiwoction
2) I-Barine construction
3) Umkhumbi building
5) Umzimba wemoto eyi-trailer
Langaphambilini I-Excellent Rust Resistance Aluminium Checkered Plate Metal
Olandelayo: Ukuthengisa Okushisayo 3003 Aluminium Plate
Ishidi le-aluminium elibunjiwe le-Stucco